Nezvedu - Ningbo Tingxuan Electrical Appliance Co., Ltd.
Ningbo tinx Electrical Co, Ltd. inyanzvi inogadzira bvudzi rinotwasuka, vhudzi remvere uye bvudzi rinotwasuka mabhurashi. Iyo inowanikwa muNingbo, yakavhurika chiteshi cheguta ine nyore kutakura.Pamakore ane simba rehunyanzvi hwesimba, mhando uye zvigadzirwa zvakagwinya, yakakwana sevhisi system, yakawana kukurumidza kukurumidza, iyo technical technical zviratidzo zveayo zvigadzirwa uye chaiyo mhedzisiro yevakawanda vashandisi vakasimbisa zvizere uye kurumbidza kwakabatana uye kuwana zvitupa zvehunhu zvemhando yepamusoro, rave mabhizinesi anozivikanwa mumakambani ekugadzira bvudzi.
Ningbo ine zvakanakira veChinese vatengesi uye nyore kwekushambadzira kwenyika. Kufanana neguta rino, Tinx Electrical idiki uye izere nesimba. Nekombinoroji yake yepamusoro, yakaenderera mberi nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuzadzisa zvido zveruzhinji rwemazuva ano nekusimudzira zvinodiwa nevatengi kuti zvikubatsire kuvhura nyika nyowani inonakidza yemikana isingaperi.
Tinx Magetsi ine timu yekusimudzira mune zvigadzirwa zvigadzirwa uye gadziriso kweanopfuura makore gumi. Iyo inogadzira zvigadzirwa zvakasiyana zvevatengi uye inopa mainjiniya ne "one-stop". Panguva imwecheteyo, isu zvakare tinoita OEM / ODM kugadzirisa maererano nezvinodiwa nevatengi. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanyanya pasi rese. Zvigadzirwa zvedu ndizvo zvinotungamira zvigadzirwa muindastiri.
Kuti usangane nezvinodiwa nevatengi uye zvemukati manejimendi, Tinx Magetsi yakagadzirisa uye yakapfuudza iyo ISO9001: mhando manejimendi manejimendi uye ISO14001: yezvakatipoteredza manejimendi system. Panguva imwecheteyo, semutengesi wePhilips, kubvira 2011. Panyaya yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye chengetedzo, Takazvipira kugadzira zvigadzirwa zvakasvibirira uye zvakachengeteka zvakasvibirira. Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvese zvinosangana nezvinodiwa neROHS uye CE.
Mune ramangwana, kambani ichaenderera ichipa kutamba kuzere kune zvayakanakira, ichigara ichitevedzera gwara re "kutungamira musainzi uye tekinoroji, kushandira musika, kubata vanhu nekuvimbika nekutevera kukwana" uye hunyanzvi hwehukama hwe "zvigadzirwa vanhu ", uchienderera mberi uchiita hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, zvishandiso zvekushandisa, hunyanzvi hwekushandira uye manejimendi nzira yekuvandudza, uye ramba uchigadzira zvigadzirwa zvinodhura-zvinodhura kusangana nezvinodiwa zvekusimudzira mune ramangwana. Kubudikidza nehunyanzvi hwekuenderera nekuvandudza zvigadzirwa zvinodhura-mari kusangana nezvinodiwa zvekusimudzira mune ramangwana, nekukurumidza kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakaderera mutengo ndiko kutsvaga kwedu kusingaperi kwechinangwa.
Joinha maoko naTinx kuti ugadzire ramangwana riri nani ...
STSGZ2008263137 - RoHS 2.0 Chitupa